Sagalee Qeerroo:Magaalaa Harar keessatti Ilmaan nafxanyaa garee satenawun hogganaman Ilmaan oromoo irraan miidhaa gahan. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSagalee Qeerroo:Magaalaa Harar keessatti Ilmaan nafxanyaa garee satenawun hogganaman Ilmaan oromoo irraan miidhaa gahan.
Sagalee Qeerroo: Amajjii 19/2020.
Magaalaa Harar keessatti Ilmaan nafxanyaa garee satenawun hogganaman Ilmaan oromoo irraan miidhaa gahan.
Ganama kana ijoolleen nafxanyaa, sababa Ayyaana cuuphaa fakkeessuun hojii siyaasaa isaanii hojjetan. Innis, alaabaa Minilik gadi guuranii magaalaa Adaree Biyyoo guutummaashee keessatti hidhanii erga waliin gahaniin booda, keessuma bahanii dallaa Masjiida Araattanyaatti fidanii hidhan. Hanga kuni hunduu raawwatamu garuu, qaamni mootummaa Abiyot kan hidhatee magaalittii jiru, usee laaluutti ture.
Yeroo ijoolleen teenya aartee kaatee dhuftee dallaarraa alaabicha hiikuuf jettu ijoolleen saatanaawu, ijaarsi ABN hundeen nafxanyootaa duraanuu qophooftee akka feetetti magaalattii dhuunfattee yaatu dhufanii ijoollee keenya hanga masjiidaatti itti seenanii ableen diddirani.
Yeroo ijoolleen waliitti yaatee garee kana ofirraa dhorkuuf jettu, akkuma barame raayyaan goolii Toophiyaa (Makkalaakayaan) amma ganaa seera kabachiisa, dhufee ijoolleen nafxanyaa akka hin miidhamne irra goruun ijoollee miidhaman itti dabalee haleele.
Qeerroon Oromoo sababa kanaan miidhamte:
1. Nuuree, ableen akka badaa dirame
2. Shaamil Hassan
3. Abdii Bakar
5. Naasir Amaan…
Ijoolleen waraanaman kunneen, haddaara/dilbii ablee nafxanyaa isa Calii Calanqootti ilmaan Oromoo Afran Qalloo fixee dhufeen har’as wawaraanamanii du’aaf jireenya giddiu jiru.
Dhaamsa: Oromoonni amantaaa kiristaanaaa (Orthodox) hordoftan gahee keessan bahaa. Amantii malee alaabaatti hin’amanne isin. Kanaaf, yeroo ilmaan habashaa waan akkasii godhu, isin nama biraa eeguu dhiisaatii dura dhaabbadhaa.
Mootummaan beekaa usee akka ilaaluuf Habashaaf mirga seeraan olii kenniteefi akka jirtus hunduu hubadhaa!
ታዳሚውን በእንባ ያራጨ የሞጣውን ድርጊት የሚያሳይ የመድረክ ስራ እና ነሽዳ በ ምርኩዝ-8
Ahmedin Jebel official – አህመዲን ጀበል
Atis keetin bashannanii nutis keenyaan bashannanna.
Baga ayyaana cuuphaatin isin gahe
Dargaggoo, Hirphaa Taammanaa jiraataa Ona Gullisoo, ganda Teeggii kan ta’e waraanni RIB mana jireenyaa isaa keessaa gadi fuudhanii ajjeesan
Daalen farduuma yaa gadhee abba soore yaabbata male.